Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/avokoa.mg.aj
Ohabolana Aiza ny tany hadina no dia ho mby ao an-karona avokoa ? [Cousins 1885 #29, Nicol 1935 #42]
Ohabolana Aza atao lamban’ ny matory: izay mahatsiaro manintona. [Cousins 1885 #357]
Ohabolana Hosahanana avokoa va Ibabay sy Lohavohitra ? [Cousins 1885]
Ohabolana Malahelo miantsena: izay mangirana rehetra atao ho vola avokoa. [Veyrières 1913 #2515, Cousins 1885 #1448]
Ohabolana Manao filohan’ Idrako: ny mitranga, am--bavako avokoa. [Rinara 1974 #1992, Cousins 1885 #1535]
Ohabolana Ny olo-marina ohatra ny vato lava sorona: izay ametrahana azy mety avokoa. [Cousins 1885]
Ohabolana Tahaka ny katsaka: izay iainana misy ta-hanimba avokoa: maitso, hanin’ ondry; mibaby, ian-tsampazan’ ny alika; main-dambana, itomanian’ ny ankizy. [Cousins 1885 #2959]
Ohabolana Vorondolo miseho andro, ka izay mahita mipaoka avokoa. [Veyrières 1913 #179, Rinara 1974 #5045, Cousins 1885 #3748]